यी लिम्बु ठिटोले बनाए काठको आकर्षक कार, मुल्य सुन्दा होस उड्यो ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)….. – SUDUR MEDIA
February 7, 2021 AdminLeaveaComment on यी लिम्बु ठिटोले बनाए काठको आकर्षक कार, मुल्य सुन्दा होस उड्यो ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)…..
सानो देश थोरै जनसंख्या तर सन्सार डराउने किसिमको अवस्था एकजुटता देखेर साच्चै गौरब गर्नुपर्ने देखिन्छ । हरेक पक्षमा एक एक गर्दै नेपालीहरुले छक्क पार्दै आएका छन । बिज्ञानको पाटोमा पनि नेपाल अगाडी बढ्दै गरेको छ । नेपालमै विभिन्न कुराहरु आबिस्कार समेत हुन थालेपछी केही आशा पलाएका छन । नेपाल आबिस्कार केन्द्रले गरेको प्रगति देखेर आशा बढेको छ ।
पछिल्लो समय नेपालका बालक देखि युवाहरुले सानै उमेरदेखि विभिन्न कुराहरू आबिस्कार गरेर भाइरल समेत हुँदै आएका छन । यस अघि बिजय रानाले रोबोट पानीजहाज बम मिसायल लगायतका सामाग्री बनाएर चर्चा कमाएका थिए । यस्तै सानै उमेरका झापा जिल्ला बार्हदशी गाउपालिकाका एक युवा शिवराज लिम्बुले काठको साइकल बनाएर सबैलाई छक्क पारेका छन ।
करिब चार बर्ष लगाएर बनाएको कार हेर्दा निकै आकर्षक बनेको छ । भाइरल जङ्गि बाबा २२ बर्से युवा बैज्ञानिकको घरमै पुगेका छन । नेपालमै बनेको काठको कारको मुल्य सुन्दा होस उड्नेछ । सन्सार चकित बनाउने काठको कार तलको भिडियोमा हेर्नुहोला । बैज्ञानिक लिम्बुले कारको सम्पुर्ण नालीबेली बताएका छन । थप कुरा हेर्नुहोस् तलको भिडियोमाः